Bacriminta ciidda | February 2020
Ugu Weyn Ee Bacriminta ciidda
Sida loo abuuro oo u koro qaraha
Su'aasha ah in qaraha qashinka ee dalku sii kordhayo ayaa sii kordhaya. Berry Tani waa dukaanka of nafaqooyinka. Waxay ka kooban tahay fitamiino iyo walxo raadraac ah oo faa'iido leh ee sonkorowga, cudurrada nidaamka wadnaha, beerka iyo kelyaha, ma aha in la xuso in ay tahay miro aad u dhadhan fiican leh. Sida wax kasta oo kale, watermelon ku koray on your gaar ah ayaa noqon doonaa wax ka faa'iido badan ka mid ah iibsatay mid ka mid ah.
Noocyada Bacriminta potash ah: codsiyada iyo guryaha
Bacriminta Potashers waa nooc ka mid ah Bacriminta macdanta kaas oo loogu talagalay buuxinta baahida dhirta for potassium. Sida caadiga ah, waxaa lagu soo bandhigaa qaababka cusbada biyaha, mararka qaarkood oo lagu daro xeryaha kale ee ku jira potassium ee foomamka noocan oo kale u oggolaanaya in dhirta ay u isticmaasho. Qiimaha Bacriminta potash ah Qiime Bacriminta potash waxaa lagu go'aamiyaa muhiimadda of potassium nafaqada macdanta ee dhirta.
Wax qarsoodi ah maaha in aqal badan oo guryo ah, iyo xitaa guryaha tuulooyinka, ay weli kululaadaan iyadoo la adeegsanayo cunto kariye kaas oo qoryaha la gubay. Nidaamkan dartiis, mulkiilaha beeruhu wuxuu leeyahay dhuxul badan iyo ash, kuwaas oo sida caadiga ah la soo saaro. Si kastaba ha ahaatee, dhuxusha waxaa loo isticmaali karaa bacriminta beerta, sidaas darteed waxaad ka ilaalin kartaa aagga ka soo jeeda cayayaanka iyo cayayaanka, iyo sidoo kale nidaaminta qoyaanka ciidda.
Humareum Humate: halabuurka iyo codsiga bacriminta
Humates waa cusbo of potassium ama sodium, kuwaas oo laga helo humic acid. HUMATE iyo acid waa kuwa ugu muhiimsan ee ciidda, diiradeeda waa humus. Taas bedelkeeda, humus waxay masuul ka tahay inta kudhowaad dhammaan hababka biochemical ee ku dhaca ciidda. Samaynta humus waxay ka timaaddaa sababtoo ah kala-soocidda walxaha dabiiciga ah, oo ka soo jeeda saamaynta biyaha, oksijiin iyo jeermiska, nasiibka ayaa la helaa.
Bacriminta Nitrogan: Isticmaal gareynta
Bacriminta Nitrogan waa unugyada iyo walxaha dabiiciga ah oo ku jira nitrogen waxaana lagu dabaqayaa carrada si loo hagaajiyo wax soo saarka. Nitrogar waa qaybta ugu muhiimsan ee nolosha dhirta, waxay saameysaa koritaanka iyo dheef-shiid kiimikaad, iyaga oo ku daraya qaybo wax ku ool ah iyo nafaqo leh. Tani waa walax aad u awood badan oo labadoodaba xasilin kara xaalada xayawaanka ee carrada, waxayna bixisaa saameynta soo horjeeda - marka la eego oo la isticmaalo.
"Shining-1": tilmaamaha isticmaalka daroogada
"Shining-1" waa badeeco bayoolaji ah oo dib loogu soo celinayo bacriminta ciidda, kordhinta wax soosaarka beeraha iyo xakameynta cudurrada. Waxaan ka wada hadli doonaa waxyaabaha ku saabsan daawooyinka daroogada, sharciyada codsiga iyo qiyaasta. Muxuu yahay diyaarinta "Shining-1" oo loo adeegsado iyo maxaa waxtar leh? Diyaarinta waxaa loo isticmaalaa in lagu so wargeliyo soosaarka miraha kala duwan iyo dalagyada dhirta ee dhirta laga beero, waraabka xagjirka ah iyo quudinta dheeriga ah.
Sidee loo kariyaa marinade for baalasha ku on shiilan, lix cuntada
Waxa la siinayo faras
Sida loo jaro (hayso) bakaylaha godadka
Sida loo sameeyo khamriga ee xamaamka u samee
Farsamayaasha muuqaalka badanaaba waxay isticmaalaan dhirta fuulaya inay qurxiyaan beerta iyo goobaha kala duwan. Waxay leeyihiin sifooyin sare oo lagu qurxiyo waxayna awoodaan inay si weyn u soo nooleeyaan oo u qurxiyaan aagga deegaanka. Ma taqaanaa? Canab yaryar, oo aan si aan dhammeystir lahayn u daryeeli karin, waxay awood u leeyihiin inay samaystaan ​​qulub cufan oo ku yaal dhammaan dhinacyada toosan. Read More
Ma u baahan tahay bakayle?
Qaababka beerashada caleenta caleen
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Bacriminta ciidda 2020